Wednesday June 26, 2019 - 06:42:36 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda G/dhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerar ka dhacay wadanka Afghanistan lagu dilay 2 askari oo katirsan ciidamada Americanka ah ee duullaanka ku jooga wadankaasi.
War qoraal ah oo Mareykanku faafiyay ayuu si kooban ugu sheegay in Talibaan ay weerar dhabbagal ah ku dishay laba askari American ah balse ma sheegin magacyada askarta ladilay iyo goobta lagu dilay.
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo booqasho dhuumasho ah ku tagay wadanka Afghanistan ayaa sheegay in ay wadaan qorshihii ay ciidamadooda ugala bixi lahaayeen wadanka.
Mike Pompeo wuxuu sheegay in wadahadalka ay kula jiraan Taliban uu meel wanaagsan marayo balse ay muddo sedax bilood gudahood ah ay heshiis dhameystiran lageli doonaan xukuumadda Kaabuul kaas oo ku aaddan ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan.
Ciidamada isbaheysiga NATO ee duullaanka ku jooga wadankan ayaa lakulmay dhiigbax ballaaran taas oo sababtay in Mareykanku uu wadahadal lafuro Xarakada Islaamiga Taliban balse illaa iyo hadda dhinacyadu masaxiixan heshiis lagu cadeynayo waqtiga kama dambeysta ah ee ciidamada American-ka ah ka baxayaan Afghanistan.